–देबी प्रसाद न्यौपाने
जतिबेला हामीले छिमेकी भारतको नाकाबन्दी खेपिरहेका थियौँ त्यतीबेला हामीले देखिरहेका थियाँ राजधानी काठमाडौँमा एक–एक लिटर पेट्रोलको हाहाकार भएको । अनि एक सिलिण्डर एलपी ग्यासका लागि ग्यास उद्योगीदेखि सुरक्षा निकायका ठूलावडाहरूको सोर्सफोर्स लगाउनु परिरहेको वास्तविकता । गाडीमा डिजेल हाल्नदेखि बाइकमा पेट्रोल हाल्नसम्म विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चाकडी गर्नुपरेको । लामो लाइनको सकसपूर्ण संघर्षपछि केही लिटर पेट्रोल पाउँदा संसार जितेजस्तो अनुभव शायद काठमाडौँवासी सबै नेपालीसँग पक्कै होला । महिनौँ कुरेर एक सिलिण्डर ग्यास पाउँदा घरमा कुनै चाडनै आएको अनुभव पनि सबैले गरेकै होलान । अनेकन समस्या र अस्तव्यस्त जीवनशैली भोगेपछि सबै नेपालीले आफू आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बहस पनि त्यतिबेला नउठेको होइन । नजिकको सोच्ने र सोहि अनुसार प्रक्रिया प्रतिक्रिया जनाउने नेपाली समाजको स्थापित बानि नै हो । भारतको चरम नाकाबन्दीका कारण हामीले राष्ट्रियताका ठूलठूला भाषण र भावनात्मक शब्दजाल पनि सुन्यौँ ।
राजनीतिक दलका नेताहरू मात्रै होइन आम सर्वसाधारणबाट पनि हामीले आफैँ स्वावलम्बन बन्नुपर्ने विषयहरू सतहमा आयो ।केही महिना हामी सबैले त्यस्ता वहसहरूमा भाग लियाँै । तर जब जसोतसो समस्याबाट पार पायाँ जीवन सामान्य हुँदै आयो । हामी सबैले नाकाबन्दीको दुःख चटक्कै विर्सियौँ र फेरि व्याकटु मंगलमानको शैलीमा जहाँको त्यहीँ फर्कियौँ । हामी भावनामा हैन हाम्रोे यथार्थतामा जानुपर्दछ । हामीले आउने समस्यासँग जुध्नका लागि पूर्व तयारी अपनाउनुपर्छ भनेपनि समस्याबाट मुक्ति पाएपछि चुपचाप बसिरहेका छौँ । दिनभरी काम गरि बेलुकाको चुल्हो बाल्ने शैलीको हाम्रो योजना साच्चिकै हाम्रा लागि बिडम्बनपूर्ण रहेको छ । यो सरकारको मात्रै कमजोरी नभई हामी नेपाली उपभोक्ताको पनि कमजोरी हो । नाकाबन्दीको सकसपूर्ण समस्या भोगीरहेका बेला हामी सबैलाई पिरोलिरहेको विषय थियो पट्रोलियम पदार्थको अभाव । त्यसो हुनुको मुख्यकारण पनि हामीसँग भएको न्यून भण्डारणको अबस्था हो । नाकाबन्दीको मार भोगेका नेपाली जनताले त्यतिबेला सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमतिर धारे हात लगाउँदै गाली गरे र भने कम्तिमा केही महिनाको भण्डारण क्षमता आयल निगमले व्यवस्था गरिदिएको भए हामीले यसरी दुःख पाउनुपर्ने थिएन । आयल निगम मात्रै होइन त्यस्तो विकराल समस्याका कारण ठप्प भएको सरकारले समेत कम्तीमा यस्ता समस्याहरूसँग जुध्नका लागि हामीले पक्कैपनि केही महिनाको मात्रै भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर । लामो सकसपूर्ण जीवनपछि नाकाबन्दी हट्यो । हाम्रो समाजले आज ती सबै कठिनाइहरू सहजै विर्सिन मिल्छ ?
वास्तविक राष्ट्रियता बलियो बनाउने आफ्नो क्षमता बृद्धि नगरी सुखै छैन । त्यो इन्धनमा मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा हामी जब आत्मनिर्भर बन्छौ तब मात्रै अर्काको मुख ताक्नुपर्दैन अनि वास्तविक रुपमा हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ अनि हाम्रो स्वाभिमान ठाडो हुन्छ । सम्भवतः हामी कति पानीमा छौँ भन्ने यथार्थताका बारेमा राम्रैसँग जानकारी भएर होला सरकारले कम्तीमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति मात्रै होइन भण्डारण क्षमता पनि बृद्धि गर्ने गरि नीति सार्वजनिक गरेको थियो । वर्षेनी पेट्रोलियम पदार्थमा १५ देखि २० प्रतिशत खपत बृद्धि भइरहेको यथार्थतालाई समेत मध्यनजर गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ , २०७३/०७४को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य मार्फत भण्डारण क्षमता बृद्धिको प्रस्ताव गरेको हो । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २००मा आपूर्ति प्रणालीमा सुधारशीर्षकमा प्रस्ताव गरिएको नीति तथा योजनामा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिको लागि न्यूनतम ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, तनहुँको खैरेनीटार र नुवाकोटको बट्टार÷बेत्रावतीमा आगामी वर्षभित्र जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव र स्रोत व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । यसका साथै काभ्रेपलाञ्चोकमा १० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यासको भण्डारण संरचना निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
नाकाबन्दीले मुलुकको धमनी बन्द भयो । राजधानी काठमाडौँमा स्मार्ट जीवन यापन गरिरहेका मानिसहरुले पनि ढुंगेयुगको सामना गर्नुपर्याे । ग्यास ओभनमा सुविधा सम्पन्न जीवन बिताइरहेकाहरू दाउरामा जसो तसो एकसरो खाना पकाएर जीवन धान्न पर्ने बाध्यतामा आइपुगे । एक हिसावले भनौँ मानवीय जीवन मात्रै कष्टकर बनेर सिंगो मुलुकको गतिनै ठप्प भयो । नाकाबन्दीका असर समग्र क्षेत्रमा परे तर सबैभन्दा ठूलो असर पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण भएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ हामी आफँँले उत्पादन गर्दैनौ । अहिलेसम्म हामीले खरिद गर्ने बजारमा पनि पूर्ण उत्पादन छैन र औपचारिक रुपमा बिबिधिकरण भइसकेको छैन । हालसम्म दक्षिणी छिमिकी भारतबाट ट्यांकरबाट खरिद गरेर ल्याउने अनि पेट्रोल पम्पहरूलाई बाड्ने अनि ती पेट्रोल पम्प मार्फत आम उपभोक्ताहरूमा वितरण गर्ने हाम्रो प्रणाली रहेको छ । कुनै कारणबस केही दिन ट्यांकर नियमित रुपमा आवातजावत गरेनन् भने सोच्नुहोस आजपनि काठमाडाँैका पेट्रोल पम्पहरूमा उपभोक्ताहरूको लाइन लागि हाल्छ ।
जस अनुसार विद्यामान नियम अनुसार सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार उसले प्रक्रिया आरम्भ गर्योे । निगम सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा जग्गा खरिद सम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति दिए पश्चात जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । ९० दिनको भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्नु अपरिहार्य थियो । किनकी उसँग देशका सबै क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध थिएन । नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम संघीय संरचना अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा कुल खपतको ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरि करिब ५ लाख ३० हजार किलो लिटरको थप इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरि नेपाल आयल निगमको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवंबजेट बिनियोजन समेत भइसकेको थियो । मुलुकको आवश्यकता परिपूर्ण गर्नुपर्ने उद्देश्य अनुरुप खरिद गरिन लागेकाले उसले रणनैतिक महत्वका स्थानमा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइदिन समेत अनुरोध गरिएकामा हालसम्म सरकारका तर्फबाट कुनै जग्गा उपलब्ध समेत गराइएको छैन ।
जिम्मेवार आमसञ्चारका माध्यमहरू यसरी मुलुकको दीर्घकालीन हितमा सरकारकै निकायले गरिरहेको कार्यक्रमलाई अवरोध गर्दै फेरि पनि मुलुकलाई परनिर्भर बनाइराख्ने षडन्त्रमा किन लागिरहेका छन बुझ्न नसकिने कुरा हो । के कुनै व्यक्तिको स्वार्थ सिंगो देशको स्वार्थको अगाडी महत्वपूर्ण हुन्छ र ? पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि गरिएको जग्गा खरिद प्रक्रिया सिधा हेर्दा सामान्य खरिद प्रक्रिया जस्तो देखिएपनि यस भित्र मुलुकको स्वाभिमान र आत्म सम्मानको विषय जोडिएको छ । यदि हामीले फेरि पनि पूर्वाधार विकास गरेनौ भने कुनै पनि बहानामा बाहिरको नाकाबन्दी खेप्नुपर्दा आम जनताको जीवन अस्तव्यस्त मात्रै होइन सिंगो देशको जीवनै ठप्प हुन्छ जुन तितो अनुभव ३/३ पटक भोगेकै छाँँ । त्यसैले हामीलाई सधै हाहाकारमै राखिरहने र सधै अरुको पाउमा जी हजुरी गरिरहन पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउन पनि पूर्वाधार विकास आवश्यकता छ । अहिले जानीनजानी जेजस्ता विषयहरू बाहिर उछालिएको छ त्यो सबै हामीलाई परनिर्भर बनाइराख्न चाहने तत्वहरूको सलबलाहाट हो । अनि हामीलाई सधै हाहाकार बनाइराख्ने स्वार्थ समुहको कुत्सित उद्देश्य अनुरुप तयार गरिएको योजनाबद्ध प्लट हो । यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरू समयमै सचेत हुन आवश्यक छ । काम गर्ने पक्षबाट पनि गल्ती कमजोरी भएका हुन सक्दछन, यसमा सुध्रिने अवसर नै दिईदैन भन्ने हुदैन, काम गर्नेले नै हो गल्ती गर्ने हो । काम नगर्ने ले कहिल्यै गल्ती गर्देन । मुल कुरा नियतको हो । तर कामै गर्न नदिने सोचले फेरी पनि देशले गति लिदैन र आत्मर्निभर हुन सक्दैन भन्न सकिन्छ ।
(न्यौपाने नेपाल आयल निगममा कार्यरत छन ।)